भारतले लिपुलेकमा सडक बनाएपछि सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न : रक्षामन्त्रीले हेलिकोप्टरबाट के देखे ? – Sunaulo Post
मुख्य पृष्ठ /समाचार/भारतले लिपुलेकमा सडक बनाएपछि सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न : रक्षामन्त्रीले हेलिकोप्टरबाट के देखे ?
भारतले लिपुलेकमा सडक बनाएपछि सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न : रक्षामन्त्रीले हेलिकोप्टरबाट के देखे ?
भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले शुक्रबार दिउँसो लिपुलेक, धार्चुला हुँदै भारत चीन जोड्ने सडक उद्घाटनबारे ट्वीट गरे । भारतीय सेना प्रमुख सहित भिडियो कन्फेरेन्स मार्फत भएको उद्घाटन समारोहले नेपालमा फेरी राष्ट्रवाद छाल शुरु भएको छ ।
तर, केही महिनाअघि नेपाल भारतको सिमा क्षेत्र कालापानीमा उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको हेलिकोप्टर यात्रा भने रहस्यमयी बनेको छ ।नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरबाट कालापानी पुगेका पोखरेलको उक्त यात्रा यतिबेला चर्चा र आलोचनाको केन्द्रमा पुगेको छ । गत फागुन ५ गते उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर मार्फत सिमा क्षेत्र निरिक्षणका लागि भन्दै हेलिकोप्टरमा उडेका थिए ।
उपप्रधानमन्त्री पोखरेल सहित प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेशसिंह ठगुन्ना, सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा उपसभामुख निर्मला जोशी बडाल, प्रदेशसभा सदस्य मानबहादुर धामी, गेल्बुसिह बोहरालगायत सुरक्षा अधिकारीसहित १० जनाको टोली नेपालको सिमा व्यास क्षेत्र प्रस्थान गरेका थिए ।नेपालको भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भारतले आफ्नो नक्सामा समावेश गरेपछि नेपालले यसमा आपत्ति जनाउँदै आएको थियो ।
दार्चुला उद्योग वाणिज्य सङ्घले आयोजना गरेको सुदूरपश्चिम पर्यटन तथा व्यापारिक मेला एवं दार्चुला महोत्सव २०७६ को उद्घाटन तथा दार्चुलास्थित दुर्गादल गुल्मको निरीक्षणको क्रममा उपप्रधानमन्त्री पोखरेल त्यहाँ पुगेका थिए । तर, त्योभन्दा अघि नै भारतीय पक्षले उक्त सडक निर्माण थालेपनि रक्षा मन्त्री पोखरेलले थाहा नपाए जस्तो गरेका थिए ।
भारतीय रक्षामन्त्री सिंहले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आधिकारीक जानकारी दिएपनि नेपाल सरकारले आधिकारीक रुपमा मुख खोलेको छैन । परराष्ट्रमन्त्री युवराज ज्ञवालीले त आफूहरुले आधिकारीक रुपमा थाहा नपाएको विवादास्पद प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
यता सामाजिक सञ्जालमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पोखरेलको फागुन ५ को हेलिकोप्टर यात्रा बारे विभिन्न टिकाटिप्पणी हुन थालेको छ ।नक्सा छाप्न के ठूलो कुरा भो र ? भूमि नै फिर्ता ल्याउँछौ भन्नुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्री !
हेलिकप्टरबाट सीमाको निरिक्षण गर्नुभाथ्यो रक्षामन्त्रीले पनि !
केही देखिएन ? भारतले बाटो उद्घाटन गरेर ट्विटरमा फोटो राखेपछि पत्रकारले नै देख्नु ? छैन त रहस्यपूर्ण ?
‘नक्सा छाप्न के ठूलो कुरा भो र ? भूमि नै फिर्ता ल्याउँछौ भन्नुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्री,’ कान्तिपुर दैनिककी पत्रकार बिनु सुवेदीले ट्वीट मार्फत व्यंग्य गरेकी छिन्,‘हेलिकप्टरबाट सीमाको निरिक्षण गर्नुभाथ्यो रक्षामन्त्रीले पनि ! केही देखिएन ? भारतले बाटो उद्घाटन गरेर ट्विटरमा फोटो राखेपछि पत्रकारले नै देख्नु ? छैन त रहस्यपूर्ण ?’यता पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पनि आफ्नो धारणा सामाजिक सञ्जाल मार्फत नै अघि सारेका छन् ।
घरमा कुकुर पाल्दा बालबच्चामा सामाजिक व्यवहार विकास हुन्छ ?
काठमाडौंको शंखरापुर नगरपालिका १४ जनाको आरडिटी रिर्पोट पोजेटिभ,